Buuhoodle oo laga sameeyey olole nadaafadeed ( Sawiro) – Radio Daljir
Seteembar 18, 2013 8:59 b 0
Buuhoodle, Sep 18-13, Magaalada Buuhoodle ayaa maanta laga ?sameeyey hawlgal balaaran oo lagu nadiifinayo xaafadaha kala duwan ee magaalada iyadoo ay ka qayb qaadanayeen noocyada kala duwan ee Gaadiidka.
Suuqyada & xaafadaha kala duwan ee magaalada Buuhoodle ayaa dhamaantood laga sameeyey ololahan nadaafadeed iyadoo lagu beegay xili uu soo dhowyahay wakhti roobaadka dayrta, taasoo la tilmaameen in laga hortegayo qashinka & biyaha roobku inay isdhexgaalaan.
Baabuurta qashinka ka gurayey Xaafadaha magaalada Buuhoodle ayaa kusoo daadinayey ?meel ka ka fog magaalada halkaasoo looga qoday hog loogu talagalay in lagu gubo qashinka oo kuyaala duleedka magaalada Buuhoodle.
Saleebaan Aadan Cilmi oo kamid ah ?golaha deegaanka ee degmada Buuhoodle oo saxaafadda kula hadlayey goobta lagu gubayo qahsinka ayaa sheegay in tani ay kamid tahay waxqbadka golaha deegaanka & balan qaadyo ay hore u sameeyeen.
Ololahan nadaafadeed ee maanta laga sameeyey magaalada Buuhoodle ayaa dadweynaha gobolku siweyn usoo dhoweeyeen iyadoo xubnaha golaha deegaanku sheegeen inay sii wadi doonaan ololaha noocan oo kale ah
Yeman iyo Soomaaliya oo ka shiray arrimaha Burcad-badeeda, Argagixisada iyo Tahriibta (Dhegeyso)